Dhacdo mudan in aad ku cibra qaadato - iftineducation.com
Dhacdo mudan in aad ku cibra qaadato
iftineducation.com – Waxaa mudooyinkaani dambe Qaaraxa Africa kusoo badanaayo Dhacdooyinka ku cibra qaadashada mudan, iyadoona ay ugu badan yihiin dalalka arrimahaasi ay ka dhacaan Tanzania, Kenya iyo Ugaandha.
Dalka Ugaandha ayaa waxaa lagu arkay dhacdo ku dhacday Ruux magaciisa lagu sheegay Zakariyah Kasaga oo fajac galisay qoyskiisa iyo dadka deegaanka, kadib, markii isagoo loo qaatay inuu geeriyooday bilaabay inuu qufac labo saac ka hor inta aan iilka la dhigin.
Ruuxaani ayaa waxaa la sheegayaa in muddo dheer uu Bukaan ahaa, iyadoona Sabtidii la soo dhaafay la sheegay inuu geeriyooday abaarihii tobankii barqanimo.
Maydkiisa ayaa waxaa lagu daboolay bustooyin iyo marooyin kale, waxaana Gurigiisa soo buux dhaafshay saaxiibadiisa si ay u soo tacsi gutaan, ugana qeyb gaalaan aaskiisa.
Muddo labo maalmood ayey qaadatay inuu maydka guriga yaallo sababo dhinaca dhaqaalaha oo reerka aad u liitay.
Waxay qoyska maydka guriga u yaallay daahsadeen Qaraabo kale oo deggan Tuulladda Kabinda ee Degmadda Rakai, oo iyagu la filayey inay kharaj kaalmo ah soo gaarsiiyaan.
Laakiin Familka waxay go’aansadeen inay maydka Zakariyah Kasaga u kireeyaan Mooto oo ay dadka Uganda u yaqaanaan Bodabooda motorcycle,si loo geeyo Tuulladda Kabiira oo lagu aasi lahaa.
Sidoo kale, Dareewalkii waday mootadda oo ay ka daba lugeynayeen dad yar oo maydka la socday ayaa waxa uu Dareewalkii dareemay maydka oo dhaqdhaqaaqayo, waxaana uu markii dambe maqlay isagoo maydkii qufacayo.
Dareewalka mootadda ayaa joojiyey mootaddii, isagoo aan gadaal gadaal eegaynin.
Dadkii mootadda ka daba lugeynayey ayaa dul yimid mootadii, waxayna arkeen maydka keliya ku dhex jiro mootadda oo jidka dhinaciisa la dhigay.
Markay arkeen inuu maydkii qufacayo ayey naxdin darteed u kala yaaceen.
Si kastaba, 20-daqiiqo kadib, dhowr geesiyaal ka mid ah dadkii la socday maydka ee firxaday ayaa dib u soo laabtay, si ay u baaraan haddii maydka oo la oran jirey Zakariyah Kasaga weli nool yahay.
Waxay ogaadeen inuu nool yahay, waxayna u yeereen Boliska Degmadda Ksensero, iyadoo ninkii maydka la mooday loo qaaday Isbitaalka Kalisizo.
Zakariyah Kasaga hooyadiisa oo lagu magacaabo Elvania Tebasulwa ayaa sheegtay inuu tabar daran yahay, isla markaana ay ku adag tahay inuu si fudud u neefsado.
Waxay sheegtay inuu haatan wiilkeeda ku jiro Qeybta Daryeelka Gaarka ee Isbitaalka, isla markaana ay dhinac fariisato Sarriirtiisa, si ay u daryeesho.
Shabaab Ma dumarkii ayay gowrac ku bilaabeen -Daawo Muuqaalkan